Liva Andriamanantena · Janoary 2018 · Global Voices teny Malagasy
Liva Andriamanantena · Janoary, 2018
Lahatsoratra farany an'i Liva Andriamanantena tamin'ny Janoary, 2018
Moa Ve Nisioka Momba Ilay Sarimiaina Masha Sy Michka I Marine Le Pen ? Tsia
Mediam-bahoaka 31 Janoary 2018
A screenshot of a fake tweet by Marine Le Pen, in which the National Front (FN) candidate criticizes the Masha and The Bear cartoon (Masha Et Michka in French), was posted on Twitter on Sunday, February 26. Pikantsarin'ny sioka sandoka nataon'i Marine Le Pen, izay nitsikeran'ny kandida avy ao amin'ny National Front (FN) ny sarimiaina Masha sy Michka navoaka tao amin'ny Twitter ny Alahady 26 Febroary.
Ireo Lahatsary Nahitana Fanehoan-kevitra Avy Amin'ny Fivoriambe Mikasika Ny Fiovan'ny Toetrandro
Oseania 31 Janoary 2018
Indreto misy lahatsary ahitana ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo olona tao amin'ny Fivoriambe mikasika ny Fiovan'ny Toetrandro izay natao nandritra ny herinandro voalohan'ny volana Desambra 2009 tany Copenhagen, Danemark. Miainga amin'ny hetsi-panoherana hatrany amin'ny dihy, zavakanto sy fampisehoana, indro ny santionany kely avy amin'ny COP15.
Fankalazana Ny Faha 60 Taonan'ny Sultan Tao Brunei
Manana lahatsoratra momba izany i Nonnie ao amin'ny bilaoginy Garden Spirit izay miresaka momba an'i Bandar Seri Begawan, renivohitr'i Brunei nandritra ny andro fankalazana .
Filipina: Bilaogeran'ny Fahalalahana
Hafanam-po 29 Janoary 2018
Manohana ny zon'ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahana maneho hevitra izahay bilaogera Filipiana. Ary ny miaro ireo zo ireo no andraikitray voalohany.
Slovakia: Ilay Saribao Tsy Nirehitra
Polonina 29 Janoary 2018
Indray takariva, nijanona teo anoloan'ny trano sady fivarotan'I Anna Pitáková ny kamiao vahiny iray nitondra saribao avy any Polonina.
Iharan'ny Fandrahonana Ny Tambajotra Finday Voalohany Ho An'ny Vondrom-piarahamonina Tompotany Ao Meksika
Amerika Latina 29 Janoary 2018
Io no hany tolotra fifandraisandavitra tokana izay hananan'ny vondrom-piarahamonina, tsy taonga tany amin'izy ireo ny tambajotra ara-tantara, tsy nanana tolotra izy ireo, tsy nahatratra azy ireo ny tambajotra, mino izahay fa tokony ao anaty lalàna ny fanafoanana ny fandoavam-bola mazava tsara ho an'ity karazana mpandraharaha ity .